Wararka Maanta: Sabti, Jan 12, 2013-Guddoomiyihii Bankiga Dhexe ee Waddanka Jabuuti oo xalay ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla Magaalada Nairobi
Marxuumka ayaa u geeriyooday dhiig maskaxda kaga furmay sida ay sheegeen dhaqaatiita isbitaalka iyo ehelladiisa, iyadoo lagu wado in maanta loo dhoofiyo dalkiisa si halkaas loogu aaso.
"Xayd muddo badan ayaan is naqaannay, wuxuuna ahaa nin af gaaban oo shaqo jecel. Bankiga dhexe ee Jabuuti wuxuu markii hore ka ahaa shaqaale markii dambena wuxuu ka noqday madax, isagoo horumar weyn gaarsiiyay bankiga," ayuu yiri Siciid Cali Muuse oo ka mid ahaa shaqaalihii BBC-da oo Nairobi jooga.
Sidoo kale, Siciid wuxuu sheegay in marxuumka loo keenay Nairobi si looga daweeyo xanuun maskaxda kaga dhacay, balse uu nasiib-darro uu cudurkaas noqday midkii uu xalay u geeriyooday.
"Marxuumu wuxuu la dhashay oo ay walaalo ahaayeen, marwada koowaad ee madaxweynaha Jabuuti, Khadro Maxamuud Xayd," ayuu Siciid Cali Muuse hadalkiisa raaciyay.
Dowladda Jabuuti ayaan weli ka hadlin geerida guddoomiyihii bankiga dhexe ee dalkeeda, iyadoo mas'uulkan lagu xusuusan doono in lacagta dalka Jabuuti aysan wax isbedel ah ku imaan tan iyo markii uu dalkaas xorriyaddiisa ka qaatay dalka Faransiiska.